Ruth & Pen Review nataon'i Emilie Pine: The Tale of Two Lives | Fiction - Bokin'izao tontolo izao
Amin'ny maha-zatovovavy azy, Clarissa Dalloway an'i Virginia Woolf dia nanangana teoria momba ny olan'ny fahafantarana ny hafa. Amin'ny fifaneraserantsika rehetra, hoy izy, dia mbola misy soritra ny maha-izy antsika; ary avy eo mba hihaona amin’olona iray dia “tsy maintsy mitady ireo olona nahavita izany ianao; na ny toerana. Angamba tokony hojerentsika koa ny fihaonan'izy ireo amin'ny kolontsaina: ny lafiny inona amin'ny tenany no hitany (ary noho izany dia hitany) amin'ny asa zavakanto, mozika, literatiora.
Pen, ilay tanora mpilalao sarimihetsika ao amin'ny tantara voalohany nosoratan'i Emilie Pine, Ruth & Pen, dia mamaritra an-dRamatoa Dalloway toy izao: "Rehefa namaky an'io boky nosoratan'i Virginia Woolf io izy tamin'ny fahavaratra lasa teo, momba ilay lehilahy taitra, dia azon'i Pen ny antony nitsambikiny. azony ihany koa ny mafy ho an’ny vadiny, izay tsy afa-nanoatra. Ny tsoahin'i Pen avy amin'ny tantara fahaefatra nosoratan'i Woolf dia mampianatra momba ny toetrany manokana: ny nahitany an'i Septimus Warren Smith, ilay veterana tamin'ny Ady Lehibe I naratra mafy, ho ivon'ny lahatsoratra. Ao amin'ny fahatsapan'i Septimus sy ny vulnerability dia mahita zavatra momba ny tenany i Pen. Mety ho sarotra ho an'ny tanora voan'ny autisme ny sekoly: vitsy ny namany ary tsy maintsy tsy mianatra tsy tapaka izy mba hiatrehana ny fahatafintohinana ara-pihetseham-po izay miseho isan'andro.
Ny famintinan'i Pen an'i Ramatoa Dalloway dia manome fanalahidin'ny fomba fijeriny izao tontolo izao feno fangorahana: afaka mahatsapa ny fanaintainan'i Septimus sy ny vadiny izy amin'ny fotoana iray ihany; afaka miaiky ny tsy fahafaliany manokana izy sady manaiky ny fomba izay mampahory ny reniny ihany koa. Misy fanambarana mifanohitra amin'ny Ruth & Pen: “Efa tara loatra. Mbola tsy tara izao"; "Mihazakazaka! Mijanòna!" Ny marina dia: Tsia. Ny marina dia: Eny. Ny anaram-boninahitra, miaraka amin'ny ampersand malaza, dia manondro ny fifandanjana eo amin'ny toerana misy ilay tantara.
Ny toko mifantoka amin'ny pensilihazo dia karakaraina tsara, mandray am-pahamatorana ny traikefan'ny tovolahy iray autiste.
Toy ny ao amin'ny Ramatoa Dalloway, misy olona roa manodidina ny hetsika, ary ny tantara dia nitranga indray andro, ny 7 Oktobra 2019 tao Dublin. Ho an'ireo toko vitsivitsy voalohany, ny fitantarana dia mifandimby azo antoka eo amin'i Pen sy Rota amin'ny alalan'ny olona fahatelo akaiky. Indroa izy ireo no niampita lalana, sady fohy, nandritra ny hetsi-panoherana ny Fikomiana Famongorana tao amin'ny kianjan'i Merrion, toerana nisehoan'ny ankamaroan'ny tantaran'i Pen. Eo izy hihaona amin'ilay tovovavy tiany, Alice; mikasa ny hamoaka ny tena fihetseham-pony izy amin'ny farany aorian'ny fihetsiketsehana. Ny toko mifantoka amin'ny pensilihazo dia karakaraina tsara ary mandray tsara ny zavatra niainan'ny tovolahy autism.
Ruth dia mpitsabo amin'ny telopolo taona. Ny 7 oktobra dia mifoha irery izy. Ny vadiny, Aidan, dia tsy miasa ary manahy ny fiverenany amin'ny hariva. Nandritra ny fotoana ela izy ireo dia nihidy tamin'ny ady iray ihany. Ho an'i Ruth, ny fihodinana telo amin'ny IVF, ireo hormonina miboiboika rehetra, ny tampon'ny fanantenana ary ny lohasaha lalina feno fahadisoam-panantenana, dia nanandrana ny fifandraisan'izy ireo. Isaky ny tsy nahomby, i Ruth dia mahatsapa fa izy sy Aidan dia "mamoy ny tenantsika bebe kokoa". Raha ny nambarany dia sahirana izy ireo: tsy afaka ny hanohy toy izany izy ary ny fandavana azy dia tsy misy afa-tsy ny fandavana izay mety ho ho avy eo amin'izy ireo.
Ruth's Script dia fanitarana sy fanamboarana lahatsoratra tena tsara avy amin'ny fanangonana 2018 malaza nataon'i Pine, Notes to Self. Avy amin'ny taonan'ny zazakely dia mifototra amin'ny ezak'izy sy ny namany amin'ny fitondrana vohoka, nifarana tamin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo handao ny IVF ary hampitsahatra ny "fanandramana" (fitenenana Pine tonga mankahala). Ny feo ao amin'ny Notes to Self dia manana hery manjelanjelatra, toy ny taratra manitikitika ny jiro, manambara amin'ny an-tsipiriany ny lafiny rehetra amin'ny lohahevitra manokana manokana an'i Pine. Ao amin'ny Ruth & Pen, mihena ny hamafin'ny fahatsapana, tsy amin'ny fomba fijerin'ny olona fahatelo ihany, fa amin'ny fampidirana feo hafa rehefa mandroso ny tantara. Aidan, Alice, ary Claire, renin'i Pen, dia manana ny tokony manokana. Ary izy ireo, toa an’i Rota sy Pen, dia olona mendrika sy manana fikasana tsara. Na dia miantoka aza izany fa lasa tantara malefaka sy miombom-pihetseham-po i Ruth & Pen, dia tsy eo ny hamafin'ny eritreritra izay manentana be ao amin'ny Notes to Self.
Tao amin’ny diary iray tamin’ny 1923, dia nanoratra toy izao momba ny fikasany ho an-dRamatoa Dalloway i Woolf: “Te hanome fiainana sy fahafatesana, saina ary hadalana aho; Te-hitsikera ny rafitra sosialy aho ary hampiseho izany any am-piasana, amin'ny endriny mahery vaika indrindra. Ny tantara nosoratan'i Woolf dia voampanga amin'ireo singa mifanohitra ireo, voatazona ao anatin'ny fihenjanana ataon'ireo mpilalao fototra roa izay misy toy ny aloka roa ho an'ny tsirairay. Tsy ampy ny fifandonana, tsy ampy ny tsindry eo amin'ireo mpilalao ao amin'ny Ruth & Pen; ny fomba firindrany sy paratactic "samy/sy" no fetra farany amin'ny fahombiazany.
Ruth & Pen avy amin'i Emilie Pine dia navoakan'i Hamish Hamilton (£14,99). Mba hanohanana ny libromundo sy The Observer, manaova dika mitovy amin'ny guardianbookshop.com. Mety mihatra ny saram-pandefasana.